काठमाडौंः काठमाडौं– संघिय संसदमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेट पेश गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन
काठमाडौंः संघीयताको मर्मविपरीत सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपियाँ दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड
काठमाडौंः बजेटले पेट्रोल, डिजेलबाट पूर्वाधार करबापत थप एक रुपैयाँ उठाउने नीति लिएको छ । हाल यो शीर्षक (सडक मर्मतसम्भार कर) अन्तर्गत पेट्रोलबाट चार रुपैयाँ र डिजेलबाट दुई रुपैयाँ प्रतिलिटर असुल
सरकारले ल्यायो १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँको बजेट
काठमाडौंः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्दै
लोक रिझा्याईको बितवरमुखी बजेटः स्रोत जुट्नेमा शंका
काठमाडौंःकाठमाडौं, जेठ १५ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन्। संघीय संसदमा बुधबार प्रस्तुत बजेट सांसद, कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने खालको
LIVE Update: संसदमा बजेट पेश, केके छन् कार्यक्रम ?
काठाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट संघीय संसदमा पेश गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषण पढिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा सबै सूचक राम्राे
साढे १५ खर्बको बजेट आउँदै, कर्मचारीको तलब २२ प्रतिशत र वृद्ध भत्ता सात सय वृद्धि हुँदै
काठमाडौं, जेठ १५ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाको चर्को दवावमा परेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउने भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट आज
आगामी आर्थिक बर्ष बजेटको विशेषता के के छन? प्रतिव्यक्ति आय ११ सय २० डलर पुग्ने लक्ष्य
काठमाडौंः काठमाडौं–सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १ सय २० डलर बनाउने गरी ल्याउँदैछ । चालू आर्थिक बर्षको सर्वेक्षणले यो वर्ष प्रतिव्यक्ति आय १ हजार
आज ४ बजे संसदमा बजेट भाषणः अहिलेसम्म विकास खर्च ४४% मात्रै
काठमाडौंः १४ जेठमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट आएको एक वर्ष पुगेको छ । तर, यस अवधिमा जम्मा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब १४
योजनाबद्घ विकासको समीक्षा : चोधौं योजना सहित
राम किशोर मेहता बिराटनगर, ३ बैशाख । छ दशक लामो योजनाबद्घ विकासको अवधिमा नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यन्वयनमा आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ चौधौं योजनाको अन्तिम वर्ष
पञ्चवर्षीय योजना : लक्ष्य निर्धारण तथा प्राप्ती
राम किशोर मेहता बिराटनगर, २३ चैत । विश्वको अन्य देशहरुमा लागु गरिएको आवधिक विकास योजना नेपालमा पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारित उदेश्यहरु पुरा गर्ने उदेश्यले वि.सं. २०१३ देखि पञ्चवर्षिय
लगानीकर्तालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रहः लगानी गर्नुहोस नाफाको सुनिश्चितता सरकारले गर्छ
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा आजबाट सुरु भएको दुइदिने लगानी सम्मेलनको शुक्रबार उद्घाटन गर्नुभएको छ । । त्यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्मेलनमा सहभागीलाई स्वागत गर्दै नेपालले लगानी